Gabadh madaxa isu gelisay Dalka Norway iyo Imaaraadka-Carabta ayaa maanta la sii-daayay,iyadoo Maxkamadda-Dubai ay ka noqotay xukunkii Gabdhan oo sida la sheegay Dubai lagu kufsaday laguna xukumay 16-ka bilood. - Cakaara News
Gabadh madaxa isu gelisay Dalka Norway iyo Imaaraadka-Carabta ayaa maanta la sii-daayay,iyadoo Maxkamadda-Dubai ay ka noqotay xukunkii Gabdhan oo sida la sheegay Dubai lagu kufsaday laguna xukumay 16-ka bilood.
Dubai(CakaaraNews) Talaado July 23,2013.Gabadh u dhalatay Dalka Norway laguna magacaabo Marete Dalelv oo u shqayn jirtay sida la shaaciyay shirkad dumarka qurxisa oo uu iska leeyahay Taajir reer-Qatar ah,ayaa sheegtay inuu kufsaday nin Carab ah oo ay ka wada shaqeeyaan shirkada,iyadoona gal-dacwadeed ka furatay saldhiga booliska,balse markii ay Booliiska ku dacweysayba,nasiib-darro waxaa lagu eedeeyay inay gogol-dhaaf samaysay,islamarkaana ay Maxkamada Dubai gadhka u galisay gabadhan xukun 16 bilood oo xadhig ah"Anigii Roonaa ayayba i Rogatay".
arintan waxaa si adag uga cadhaysiisay Dawladda Norway oo ku goodisay hadii aan la sii-deyn Marete Dalalev oo 24-jir dad'deeda lagu qiyaasay in xiriirka Diplomaasiyeed ay u jarayso Dalka Imaaraadka-Carabta.
Shirkada ay u shaqayn jirtay gabadhan noorweejiyaanka ah ee ku andacoonaysa in la kufsaday ayaa ay iska lahaayeen lamaanaha isqaba ee lagu magacaabo Wissam Almana iyo Xaaskiisa janet jackson. Gabadhaan ayaa waxaa u dagaalamay Warbaahinta Caalamka oo malamahan toosh ku ifiyay wax ay ku tilmaameen cadaalad-daradda ka jirta Imaaraadka-Carabta,waana midda sababtay inay maanta Baasaboorkeedii dib ugu soo celiyaan gabadhan,kana noqdaan 16-kii bilood ee lagu xukumay.
Lama yaqaan in mag-dhaw gabadhan la siinayo,inkastoo ay durba Warbaahinta Caalamka qaarkood qoreen in Dawladda Imaaraadka-Carabta ay iska laaluusheyso Gabadhan si ay uga noqoto fadeexadaha maalmahan ay ku baahisay Warbaahinadda Caalamka,iyadoo wareysiyo siiyay Teleefishino Caalami ah iyo Webseydyo aad loo akhristo